Misokatra eny amin’ny Antenimieran’ny Indostria sy Varotra (Chambres de Commerce) manerana ny Nosy ny fandraisana ny antontan-taratasin’ireo tanora maniry hisitraka izany.
15 andro ny fe-potoana hahazoana ny famatsiam-bolan’ny tetikasa rehefa avy nandalo ny fantina rehetra.
Nampirisika hatrany ireo tanora ny filoha Andry Rajoelina mba ho sahy hanangana tetikasa sy ho tia karokaroka. “Mila fahasahiana sy finoana ny manangana orinasa. Andraikitro ankehitriny ny manolo-tanana ireo tanora Malagasy, mba hamorona asa eto amin’ny firenena ary handray anjara feno amin’ny fampandrosoana ny firenena”, hoy izy.
Volobe-Toamasina II: Hanorenana foibe famokarana herinaratra manana tanjaka 120 MW
Trafika « bois de rose »: Lasa any Singapour ny minisitra Alexandre Georget »